Iye zvino yave kuwanikwa iyo nyowani vhezheni yeOPNsense 21.7 "Noble Nightingale" | Linux Vakapindwa muropa
Iye zvino inowanikwa vhezheni nyowani yeOPNsense 21.7 "Noble Nightingale"
Vagadziri veiyo OPNsense chirongwa ichangobva kuziviswa kuburitswa kweshanduro nyowani ye "OPNsense 21.7" iyo yavanoronga seimwe yematanho makuru ekuchinja kwekodhi. Uye ndizvozvo mushanduro iyi nyowani shanduko dzakasiyana siyana uye kugadzirisa kwakaitwa Izvo zvinomira pachena kuti iyo yekumisikidza iyo yakatsiviwa kupa yemuno ZFS kumisikidza uye kudzivirira kutadza mune chaiwo michina inoshandisa UEFI.
Kune avo vasingazive OPNsense, iwe unofanirwa kuziva izvo forogo yeiyo pfSense chirongwa, Yakagadzirwa nechinangwa chekuumba kit yakavhurika yekuparadzira kit iyo inogona kuve neanoshanda padanho rekushambadzira mhinduro dzekuendesa kweye firewalls uye network masuo.
Kusiyana pfSense, chirongwa ichi chakaiswa seisingatariswe nekambani imwe chete, sezvo ichivandudzwa nekutora chikamu chaiko kwenharaunda uye iine yakajeka nzira yekusimudzira, pamusoro pekupa mukana wekuti ishandise chero zvazvinoitika mune yechitatu-bato zvigadzirwa, kusanganisira vezvokutengeserana.
Pakati peiyo OPNsense mikana unogona kusiyanisa iro rakazara rakavhurika dhizaini yekuunganidza, pamwe nekugona kuisa mapakeji pamusoro peyakajairika FreeBSD system, mutoro balancer, webhu interface yemasangano ekubatanidza vashandisi kunetiweki, maitiro eanoonekwa uye emifananidzo yakajeka, pakati pezvimwe zvinhu.
1 Main nyowani maficha eOPNsense 21.7 "Noble Nightingale"
1.1 Dhawunorodha vhezheni itsva yeOPNsense 21.7
Main nyowani maficha eOPNsense 21.7 "Noble Nightingale"
Iyi vhezheni itsva ye OPNsense 21.7 inosvika ine zvinopfuura 1000 zvisimbiso mune yako huru uye plugin repository kubvira yekupedzisira vhezheni huru. Iyi vhezheni yekuparadzira inovaka pane zvinoitika muHardenedBSD 12.1, nepo inotevera vhezheni, 22.1, zvakarongwa kutamira kune FreeBSD 13.
Pakati pekuvandudzika kunoratidzika mushanduro iyi nyowani iri ichangobva kugadzirirwa chinzvimbo chemoto chekuongorora, Kunze kwaizvozvo matemplate iyo inobvumira kubatanidza seti yemasaiti, mauto uye madoko ane rimwe zita rekufananidzira mumitemo yemoto, akawedzera kugona kudoma masiki madiki mumambure.
Zvakare mune ino OPNsense 21.7 Kuunza matsva uye akagadziridzwa enharaunda-anoshamisika plugins, senge Radius Proxy plugin iyo, kuwedzera kune yakajairwa UDP yekufambisa, inotsigirawo TLS (RadSec), pamwe ne RADIUS pamusoro TCP uye DTLS.
Tinogona zvakare kuwana izvo mugadziri mutsva akurudzirwa izvo zvinopa yakasanganiswa rutsigiro rwe kuiswa pazvikamu nefaira system ZFS uye yakakodzera kushandiswa pamashini chaiwo achishandisa UEFI.
Chimwe chitsva chinomira kunze ndechevashandisi vebhizinesi, kubvira iyo nyowani syslog-ng TLS sarudzo dzekufambisa dzaitwa uye iyo itsva odhita nzira, yekuteerera zvinodiwa, zvinogamuchirwa zvinowedzerwa.
Chinhu chikuru cheMVC, Phalcon, chakagadziridzwa kuita vhezheni yechina.
Yakagadziriswazve interface ye firmware inogadziridza.
Mune iyo danda inoratidza chiitiko chekupura traffic, izvo zviripo zvitupa zvinoratidzwa kuti zvidzivise kududzirwa zvisizvo mushure mekushandura mutemo wakatarwa.
Yakabviswa NextCloud backup kubva kune yakakosha mashandiro
Iyo PHP memory muganho yakawedzerwa kusvika 1GB
Chisina kushandiswa Traffic API dhibhodhi feed yakabviswa
Iko kushandiswa kwevatengi zvitupa muwebhu GUI ikozvino kwadzivirirwa
Yakagadziriswa PHP 7.4 yakadzora yambiro mu IPv6 raibhurari
Dhawunorodha vhezheni itsva ye OPNsense 21.7
Si unoda here kuwana iyi nyowani vhezheni solamente Iwe unofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chekutora uko iwe kwaunogona kuwana iyo yakanyorwa mufananidzo muchimiro che LiveCD uye system system yekunyorera kuFlash drives (422 MB) mune inotevera link
Kodhi yekodhi yezvinhu zvekuparadzira, pamwe nemidziyo inoshandiswa kuvaka, inoparadzirwa pasi pezenisi reBSD.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iye zvino inowanikwa vhezheni nyowani yeOPNsense 21.7 "Noble Nightingale"